I-Cambridge Quantum Ihlangana Ne-Honeywell Ukwenza I-Quantum Computing Supergiant - 【Ukuqhathanisa】 2022
ICambridge Quantum Ihlangana ne-Honeywell Ukwenza I-Quantum Computing Supergiant
I-Cambridge Audio Melomania 1+ True Wireless Earbuds - Bluetooth 5.0, Hi-Fi Sound, Headphones ...
Izinkampani ezimbili ezihamba phambili ze-quantum computing, i-Honeywell Quantum Solutions kanye neCambridge Quantum, zihlanganyele ekwakheni i-Quantinuum, okubhekwa njengenkampani yokuqala emhlabeni egcwele isitaki esigcwele se-quantum.
Ngokusebenzisa ubuchwepheshe be-quantum bezinkampani zayo ezimbili zabazali, i-Quantinuum ihlela ukunikela ngohlelo oluphelele lwezingxenyekazi zekhompuyutha ze-quantum nesofthiwe, okuhlanganisa nesistimu yokusebenza ye-quantum yokuqala yemboni.
“Siqhutshwa isayensi nebhizinisi, futhi izinga lethu kanye nokuba khona kwethu emhlabeni wonke kulobu buchwepheshe obubaluleke kakhulu kuzonikeza ubuholi endaweni ngayinye ebalulekile ehlanganisa 'okufanele ube nakho' kwe-quantum computing ukunikeza izixazululo zomhlaba wangempela kuwo wonke umuntu. evela kumakhasimende ethu kanye nozakwethu, ”kusho u-Ilyas Khan, umsunguli weCambridge Quantum, ozohola iQuantinuum njenge-CEO.
U-Honeywell uchaza ukuthi imikhiqizo ye-Quantinuum nezixazululo kuzosiza ukusekela inqwaba yemisebenzi ebaluleke kakhulu, njenge-cybersecurity nokubethela, ukutholakala kwezidakamizwa nokusabalalisa, nokuningi.
I-Quantinuum inethemba lokuletha izixazululo ngendlela yokuthi zihambisane nezinhlobonhlobo zamaphrosesa we-quantum hardware, njengohlelo lwe-Honeywell-powered Model H1, kanye ne-IBM's suite yamakhompyutha e-quantum.
Ukufeza lokho, i-Quantinuum ithe izonikeza bonke abathuthukisi be-software ye-quantum ukufinyelela okuvulekile ku-"tket," ikhithi yokuthuthukisa isoftware ye-quantum ezimele.
"Amakhasimende e-Quantinuum manje azokwazi ukufinyelela ohlelweni lokuqala lwe-quantum lokusebenza emhlabeni, isofthiwe nezinhlelo zokusebenza ezizimele, konke okuzosetshenziselwa ukuhlangabezana nezidingo zebhizinisi eziyinselele kakhulu ezibhekene nezinhlelo zekhompiyutha ezivamile," kusho uDarius Adamczyk, uMqondisi Omkhulu. kusuka ku-Honeywell, ojoyina i-Quantinuum njengomongameli.